पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह बाबु बने, करिनाको साथी हेजल प्रति एकै नजरमा यसरी भएको थियो प्रेम ? « Etajakhabar
भारतीय टिमका स्टार अलराउन्डर युवराज सिंह पिता बनेका छन् । पूर्व क्रिकेटरले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना फ्यानहरूसँग यो खुसीको खबर साझा गरे तर यो समयमा मानिसहरूले आफ्नो गोपनीयताको सम्मान गर्ने आशा पनि व्यक्त गरे। सबै प्रकारका क्रिकेटवाट विदा लिएका युवराजले हेजल किचले छोरालाई जन्म दिएको बताएका छन् । युवराज र हेजलले केही समय डेटिङ गरेपछि नोभेम्बर २०१६ मा विवाह गरेका थिए । युवराजले १० जुन २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका थिए।
इन्स्टाग्राममा खुसीको खबर साझा गर्दै युवराज सिंहले लेखेका छन्, ‘हाम्रा सबै फ्यान, परिवार र साथीहरूलाई। पुत्ररत्न पाएकोमा हामी धेरै खुसी छौं। हामी यो आशिष्को लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं र आशा गर्दछौं कि हाम्रो गोपनीयताको सम्मान गरिनेछ। युवराज र हेजलले सिख र हिन्दू परम्परा अनुसार विवाह गरेका हुन् । गुरुद्वारामा विवाह गरेपछि दुवैले गोवामा डेस्टिनेशन वेडिङ पनि गरेका थिए ।
हेजल कीच मोडल तथा अभिनेत्री हुन् । हेजल कीच सलमान खान र करीना कपूरसँग फिल्म बडीगार्डमा देखिएकी छिन् । करिना र हेजल मिल्ने साथी पनि हुन् । उनीहरु एक पटक कपिल शर्माको शो मा सहभागी भएका थिए । त्यती बेला उनीहरुले आफ्ना प्रेम जिवनबारे खुलाएका थिए । ३ वर्ष सम्म हेजलले युवराजलाई कुनै मतलब गरिन्न । उनलाई युवराज क्रिकेट खेलाडी हुन भन्ने पनि थाहा थिए । अहिले पनि सेजललाई क्रिकेट प्रति त्यती मोह छैन । तर तीन वर्ष कुरेपछि हेजलले युवराजको प्रेम स्वीकार गरेकी थिइन् । यसबाहेक उनी रियालिटी शो बिग बोसको २०१३ सिजनमा पनि देखा परेकी थिइन् ।
युवराजले यसअघि साढे तीन वर्षसम्म अनुहार नदेखाएको बताएका थिए । मैले उनलाई भेट्न आग्रह गरेँ भने उनले अस्वीकार गरिन् । उनीसँग पहिलो पटक कहिले र कसरी भेट भयो ? त्यसपछि पहिलो पटक भेट्दा उनी अगाडिबाट हिँडिरहेकी थिइन् ।
ूमलाई लाग्यो कि कोही केटा हिँडिरहेको छ (ठट्टा गर्दै)। तिनको चाल केटाहरूको जस्तै छ। त्यसैले मैले यिनलाई पहिलो पटक यस्तो देखेको हुँ। मलाई लाग्यो कि यो सही हो, यो केटीको चाल होइन। त्यसपछि मैले हेरें। लुगा। त्यसैले मैले भने कि लुगा जस्तो सुकै लगावस मतलत गर्दिन अनुहारमा मात्र ध्यान दिन्छु। अनुहार साह्रै प्यारो छ ।
हेजलले शोमा भनिन्, ‘जब हामी पहिलो पटक भेट्यौं, त्यतिबेला अगाडिबाट एउटा यस्तो केटा नमस्ते गर्न आएको थियो । मैले क्रिकेट कहिल्यै देखेको थिइनँ । युवराजको नाम मात्र सुनेको थिएँ । टिभी चलिरहेको थियो, चौका र छक्का हा न्ने गर्थे, मलाई के फरक पर्छ र भन्ने लाग्थ्यो । हेजलको भनाइप्रति प्रतिक्रिया दिँदै युवराजले घरको कुखुरा दाल बराबर हुने बताएका थिए । हेजलले भनिन् कि जब युवराजले मलाई कफीको लागि समय मागेको थियो, मैले हुन्छ भने तर फोन स्वीच अफ गरेको थिएँ ।